«Tranon’akoho !» -
14/04/2018 admintriatra Tresaka 0
Inona tsara moa no tena zava-misy marina eto amin’ny firenena ity rehefa jerena amin’ny saina tony tsy mitanila e? Tsotra ny valiny: ireo tsy lanim-bahoaka na ireo efa namotika ity tanindrazana iombonana ity no avo vava sy be lazao.
Haka ohatra avy hatrany isika, dia ny mikasika ny minisitry ny Tetezamita teo aloha, Ihanta Randriamandranto. Be lazao tahaka ireny hoe tena tia tanindrazana sy niasa ho an’ny tanindrazana ireny mihitsy, kanefa ny fiaran’ny minisitera aza tahaka ny “tranon’akoho” tamin’ny fotoana namerenany azy, amin’izay indray efa nitady fomba maro tsy namerenana ilay fiarakodia mihitsy. Inona no mba vitan’izany Ihanta Randriamandranto izany tamin’ny fotoana naha minisitry ny Fambolena ny tenany?
Tokony mba mitsara tena kosa aloha vao manenjika sy mitsikera ny hafa e! Fiara novidiana tamin’ny volam-bahoaka tsara tarehy izao no noraisin’ny tanan’izany Ihanta Randriamandranto izany, “tranon’akoho” sisa rehefa nalaina tany aminy. Na izany fotsiny aza dia ahafahana mitaratra hoe tahaka ny ahoana marina ireto mpitabataba rehetra ireto. Dia mba tahaka ny ahoana izany raha olona mitovy amin-dry Ihanta Randriamandranto no mitantana ny firenena?
Ny fahalovana nandritra ny dimampolo taona mahery navelan’ireo mpitondra nifandimby no tsy maintsy narenin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina tao anatin’ny efatra taona. Tsy nisy zavatra nandeha intsony ‘nge teto tamin’ny fotoana nandraisan’ny Filoha ny fahefana e! “Tranon’akoho” daholo izay notopazan’ny maso. Jereo fotsiny ny zava-misy eto Antananarivo renivohitra kanefa vola be tahaka ny inona no miditra ao amin’ny CUA, tantanin’i Lalao Ravalomanana, andriamanitra kely ivavahan-dry Ihanta Randriamandranto!
Tsy mahita ny maloto nataony mihitsy ireo mpitsikera e! Olona tsy nahavita na inona na inona kanefa nitsentsitra ny volam-bahoka nandritra ny fotoana naha minisitry ny Tetezamita azy no be vava ankehitriny. Tsotra ny resaka: ho avy ny fifidianana, dia milatsaha misedra vahoaka, ary mba mahaiza manaja tena rehefa tsy lanim-bahoaka, ary raha sendra tafita mba aza tao tahaka ireny “tranon’akoho” ireny intsony ny fananam-bahoaka e!